Midira amin'ny fifehezana ny yoga, ny fanatanjahantena amin'ny taona | Nutri Diet
Midira amin'ny fifehezana ny yoga, ny fanatanjahantena amin'ny taona
PaÃ¼ Heidemeyer | | Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena, fahasalamana
Yoga dia manana mpanaraka bebe kokoa, olona maro kokoa izay mifamatotra. Fitsipi-pifehezana izay mety hahasoa antsika rehetra, mora ampiharina ary manome tombony lehibe ho an'ny vatana sy saina. Ianaro ny tombony azo amin'ny fampiharana yoga, ny fanatanjahantena amin'ny taona.
Yoga dia nampiharina nandritra ny an'arivony taona maro, fanatanjahan-tena heverina ho fanatanjahantena ankehitriny satria manampy amin'ny fanatanjahan-tena ny vatana, mitazona endrika sy fahasalamana tsara. Mety ho an'ny sokajin-taona rehetra satria ny olona mihitsy no mibaiko ny hetsika arakaraka ny fahaizany sy ny tanjony ary ny tanjony.
1 Yoga, tombony fotsiny
2 Zavatra tokony ho ao an-tsaina alohan'ny fampiharana yoga
Yoga, tombony fotsiny
Ny fampiharana an'io fifehezana io indroa isan-kerinandro dia manampy amin'ny fiarovana ny vatantsika. Mitranga izany satria ny fifantohan'ny ra amin'ny molekiola iray izay mifandray amin'ny fisehoan'ny aretim-po, toy ny aretim-po, diabeta karazana 2, na vanin-taolana.
Amin'ny lafiny iray, Ny fanazaran-tena amin'ny yoga dia hanatsara ny sakafonao, satria ho lasa olona manana laharam-pahamehana hafa ianao, ary ho fantatrao izay hohaninao amin'ny fotoana rehetra.
Yoga koa dia tena atoro ho an'ny olona mihoatra ny 65 taona, manampy amin'ny fisorohana ny fahalavoana satria mihabe ny fahafaha-manovaova anao, mitombo ny fifandanjana sy ny fahatokisan-tena rehefa mandeha amin'ny lalana mihodinkodina kokoa ary mahatsiaro ho voaro ianao.
Zavatra tokony ho ao an-tsaina alohan'ny fampiharana yoga
Mahereza tsara. TTokony ho fantatsika fa ny fahombiazan'ny fampiharana dia mitoetra ao amin'ny tenantsika, tsy maintsy tadidintsika ny fifehezana, ny faharetana ary ny finiavana hahatratra ny soa rehetra azo amin'ny yoga.
Fitohizan'ny faharetana. Tamin'ny voalohany dia very isika ary somary misavoritaka amin'ny fihetsika rehetra, ataovy mora foana isaky ny fotoam-pivoriana, omeo fotoana ny tenanao, mazàna 4 herinandro vao mianatra ireo toerana yoga voalohany sy ny fomba fanaovana azy ireo tsara. Ny tsara indrindra dia ataovy indroa isan-kerinandro ilay hetsika, maharitra 45 minitra ary aleo maraina na alohan'ny hatory.
Tontolo iainana. Ilaina ny fananana toetrandro mampiadana, misy rivotra ary milamina. Toerana tsy misy sakana izay ahafahana mampiroborobo ny tontolon'ny fitoniana sy ny fialan-tsasatra.
Mitandrema amin'ny aretina. Tsy tokony hohadinointsika fa fanatanjahan-tena io ary raha mijaly amin'ny taolana na ny tonon-taolana isika dia mila manatona ny dokotera hanome antsika mialoha ny fanatanterahana an'io asa an'arivony taona io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Midira amin'ny fifehezana ny yoga, ny fanatanjahantena amin'ny taona
Hatsarao ny fitetezana ny tsinay amin'ny voasarimakirana
Dite mangatsiaka miaraka amin'ny sokay hanatsarana ny metabolisma ary handresy ny hafanana